गैरआवासीय नेपाली संघका हर्ताकर्तामाथि प्रश्नैपश्न | Ratopati
रोम सम्मेलन उद्घाटनको तस्विर
लाखौँ नेपाली वैदेशिक रोजगारीको माध्यमबाट आफ्नो र परिवारको भरणपोषण गर्न बाध्य छन् । आफ्ना रहरले मात्र विदेशिएका हुन् भन्ने बहसले हामीलाई नागरिक अधिकारबाट अलग्याइदिन्छ । नेपालीहरू प्रवासिनु बाध्यकारी पीडा हो । यसमा जीविकोपार्जन नै बाध्यकारी कारण हो । सरकाले नागरिकप्रति गर्ने सुरक्षा, शिक्षा र रोजगारीका नीतिले अधिकांश नागरिकलाई थातथलोबाट पलायन गराउने गराउने गरेको छ । भएको थोरै सम्पत्ति, घर र पारिवारिक तथा सामाजिक मोह त्यत्तिकै छाड्न सक्दैन भन्ने बहसले नै हाम्रा निर्णयहरूको जराहरू समात्न सहजता प्रदान गर्छ । यस आलेखमा एनआरएनए विगतको विभिन्न तहमा भएका केन्द्रीय तथा क्षेत्रीय बहसमा आएका सकारात्मक कुरा, बहसमा नआएका र बहसमा ल्याउन नचाहेका कारण र आगामी नेतृत्व कस्तो हुनेबारे चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
एनआरएनएको रोम बहसले केही एनआरएन नीति निर्माण र कार्यक्रमिक मुद्दाहरूबारे प्रकाश पार्ने प्रयत्न गरेको छ । यसलाई स्वागतयोग्य मान्नुपर्छ । जसमा पर्यटन विकास लगायत नेपालमा सीप र प्रविधिसहित लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने कुराहरूसमेत पर्छन् ।
अर्काे कुरा, पुरानो पुस्तालाई आफू बसोबास गरेको देशको भाषा, संस्कृति, राजनीतिक र ऐतिहासिक तथा भौगोलिक ज्ञानको जति आवश्यकता रहन्छ त्यस्तै प्रवासमा रहेका नेपाली नयाँ पुस्तालाई नेपालको भाषा, संस्कृति, राजनीतिक र ऐतिहासिक तथा भौगोलिक ज्ञान त्यति नै आवश्यक पर्छ । त्यसका लागि नेपालीले कहीँ संस्थागत र कहीँ व्यक्तिगत रूपमा मातृभाषाका स्कुलहरू सञ्चालन गर्दै आएका छन् । उनीहरुलाई रोम बैठकले धन्यवाद ज्ञापन गर्याे । त्यस्तै सम्मेलनमा सञ्चालन गरिएका विभिन्न सेसनका बुँदाहरू हेर्दा लगानीद्वारा प्रवास र नेपाल जोड्ने, पर्यटन प्रवद्र्धनलाई प्राथमिकतामा राख्ने, पहिचान बचाउने कार्यक्रमलाई प्रोत्साहन गर्ने, नागरिकतासम्बन्धी प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था र गैरआवासीय नेपालीलाई थप अधिकारका लागि पहल जारी राख्ने, गैरआवासीय नेपाली र विदेशी लगानी आकर्षित गर्न पहल गर्ने, गैरआवासीय अभियानमा समेत महिलाको सहभागिता बढाउने, भूपूगोर्खाहरूले उठाउँदै आएको मागप्रति ऐक्यबद्धता जाहेर गर्नेलगायतका मुद्दा निर्णयमा पुर्याइयो । यी स्वागतयोग्य कुरा हुन् ।
यसैगरी बसाइँसराइका मुद्दा, मेघा प्रोजेक्ट, पर्यटन प्रवद्र्धन, नेपालमा लगानीका अवसर र चुनौती, सीप तथा प्रविधिको आयात, युवा वा नयाँ पुस्तालाई गैरआवासीय नेपाली सङ्घप्रति आकर्षण र उत्तरदायित्व बोध, सबैका लागि शिक्षा अभियानमा सघाउ, विधान सभाको परिमार्जन, नागरिकताको विषय (सम्पूर्ण अधिकारसहितको नागरिकताका लागि पहल) र महिलाका आन्तरिक तथा बाह्य गतिविधि, चासो र मुद्दाहरूबारे राजदूतहरूको सहभागिता र सक्रियतामा एआरएममा छलफल गरेको देखियो । ती सबै शीर्षकका छलफल सान्दर्भिक भए पनि निर्णयको व्यवहारमा उतार्ने तत्परताले त्यसको अर्थ राख्नेछ ।
बैठकहरुमा प्रवेश नपाएका विषय
डायस्पोरामा पत्रकारिताको महत्त्व, डायास्पोरिक साहित्यिक गतिविधि वा प्रकाशनको अभिलेखीकरण, प्रोत्साहन र सम्मान, गैरआवासीय खेलकुद परिषद्को निर्माण र सम्बन्धित गतिविधि, डायस्पोरामा भएका नेपाली व्यवसायीहरूबाट मानव तस्करीको विभिन्न आरोपहरूबारे एनआरएनका अभिमत र सङ्घको अवधारणा आदिबारे पनि खुला बहस हुनु अनिवार्य थियो । त्यसले डायस्पोराको सबै क्षेत्रलाई समेट्न सक्थ्यो । सङ्गठनलाई हिजोका गल्तीबाट सच्चिने अवसर मात्र नभई सङ्गठनको छायामा हुने र गरिने अवैधानिक चलखेललाई समेत निरुत्साहित पाथ्र्यो ।
खोज पत्रकारहरूको अन्तरार्ष्ट्रिय संयन्त्र ‘दी इन्टरनेसनल कन्सोर्टियम अफ इन्भेस्टिगेटिभ जर्नालिस्ट’ (आईसीआईजे)ले सन् २०१७ मा गरेको ‘पनामा लिक्स’मा गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए) का सात जनाले ट्याक्स हेवन मुलुकहरूमा लगानी गरेको तथ्य सार्वजनिक गरेको थियो । त्यसमा एनआरएनएका नेतृत्व वर्गले देशमा लगानी गर्ने बहानामा ट्याक्स छल्ने र राज्यलाई कालोधनको मारबाट थला पार्ने गरिरहेका त छैनन् ? यसबारे समेत बहस हुनु र सम्बन्धित पक्षसँग जानकारी मागिनु सर्वथा जायज हुने थियो ।
यस्ता तीता तथ्यबारे पत्रकारहरू राखेर बहस गर्ने सवालमा एनआरएनएका अभियन्ताहरू डराउनु हुँदैनथ्यो । पत्रकारहरूको अभिप्राय संस्थागत सुधारका पक्षमा हो भन्ने कुरा आझै पनि केही कुटिल अभियन्ताहरूले पचाउन सकिरहेका छैनन् । त्यसैकारण उनीहरूले सञ्चार क्षेत्रमा लगानी गरिरहेका हुन्छन् र आफ्नो तलबबाट पालिएका पत्रकारहरू मात्र बोलाउँछन् । यस काइदाका संस्कारहरूले एनआरएनएलाई बचाउनेभन्दा डुबाउने सम्भाबना बढी हुन्छ ।
एनआरएनएका टाठाबाठा अभियन्ताहरू विदेशमा समेत गैरकानुनी बाटोबाट धन कमाउन किन तल्लीन छन् ? एनआरएनएको नेतृत्व तहमा रहेका क्षेत्र कुमार श्रेष्ठलगायत केही नेपाली गैरकानुनी धन्दाका कारण जेलमा पुग्दासमेत उनीहरूलाई सम्बन्धित संस्थाले सार्वजनिक रूपमा कारबाही गरिएको छैन ? अन्य सुन वा मानव तस्करका आरोपीहरूलाई समेत अहिलेसम्म परिषद्को अनुशासन समितिले स्पष्टीकरणसम्म लिने जाँगर गर्दैन ? त्यो के हो ? यी विषयमा समेत डायस्पोराका नेपालीले क्रमशः चासो राख्न थालेको देखिन्छ । जसलाई अन्यथा मानेर एनआरएनए कदापि पन्छिन मिल्दैन ।
क्षेत्रीय बैठकहरूमा एनआरएनएको लोगो र नेपाली झन्डा प्रयोग गरेर गरिने मानव तस्करी, आर्थिक अपचलन, शोषण तथा अन्य खराब प्रवृत्तिबाट सहज निकास निकाल्ने बाटोबारे खुला बहस हुनुपथ्र्याे । सङ्गठनभित्र भएको व्यापक बेथितिबारे पर्याप्त छलफल हुनुपथ्र्याे चाहे त्यो शाखाहरूलाई समावेश गर्ने सवालमा होस् वा कार्यक्रम तय गर्ने सवालमा होस्, ती बेथितिबारे सम्मेलनमा बहस हुन सकेका छैनन् । युरोपका पत्रकारले जुनसुकै विषयमा पनि छलफल गर्ने र आफ्नै मञ्चबाट कार्यक्रम लन्च गर्ने हैसियत राख्छन् । तर उनीहरूसँग बसेर कार्यक्रम बनाउनु त के कुरा, उस्तै परे कार्यक्रमबारे थाहा नै दिइँदैन । एआरएममा कार्यक्रमसहित सहभागिताबारेको विषयबारे एनआरएनएसँग धेरै बहस गर्नुको खासै औचित्य रहेनछ भन्ने कुरा विगतले समेत प्रस्ट्याइसकेको छ ।
कमाउ धन्दामा एनआरएनए लागेको आरोप
एनआरएनएको कुनै पनि निकायमा आर्थिक पारदर्शिताका लागि अनुगमन, परीक्षण र कारबाहीको परिपाटी छैन । त्यो खालि विधानमा मात्र सीमित छ भनिन्छ । एनआरएनएका केही नेतृत्व तहका व्यक्तिले देशभित्र र बाहिर आफू वा आफन्तको नाममा विभिन्न नामका ट्राभल्स एजेन्सी, म्यानपावर कम्पनी खोलेका छन् । उनीहरूले अवैधानिक रूपमा मानव तस्कारी र कलाकारहरूको ठेक्कापट्टामार्फत सोझासाझा नेपालीलाई झुक्याएर अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोप छ । तर डायस्पोराका नेपाली सङ्घ सङ्गठनहरू त्यस्ता व्यवसायीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने कुरा त पर जाओस् उनीहरूको सम्पत्ति सम्बन्धित निकायमा छानबिन होस् भनेर माग राख्नसमेत सक्दैनन् ।
केही समय अगाडि, यस विषयमा मिडियाकर्मीले वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक भीष्मकुमार भुसालसँग गम्भीर चासो राखेका थिए । उनले वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक भीष्मकुमार भुसालले म्यानपावर व्यवसायमा रहेका विकृति हटाउने गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागसँग समझदारी भइसकेको बताए । हालसालैबाट नेपाल सरकारले समेत यस विषयमा गम्भीर चासो दिएको कारण अब केही हुन्छ कि भन्ने आशा पलाएको छ ।
त्यस्तै, त्रिभुवन अन्तर्राीष्ट्रय विमानस्थलका अध्यागमन अधिकृत कमलप्रसाद पराजुलीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले पक्राउ गरेको छ । सेटिङ मिलाई नेपालीलाई भिजिट भिसामा पठाउने कार्यमा संलग्न रहँदै आएको, भिजिट भिसामा विदेश जाने नेपालीलाई एनआरएन तथा बिचौलियासँग मिलेर अध्यागमन अनुमति दिने र त्यसको अभिलेखसमेत नष्ट गर्ने कार्यमा संलग्नता देखिएपछि उनलाई पक्राउ गरिएको हो भनिन्छ ।
यसअघि अख्तियारले विमानस्थल अध्यागमनमा रहेर बाहिरी–भित्री सेटिङमा अकुत सम्पत्ति कमाउने अधिकृत रमाकान्त अर्याललाई पक्राउ गरी विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । तर यस्ता गम्भीर विषयमा एनआरएनए केही बोल्दैन र मौन बस्छ । बेल्जियममा समेत कहिले नेपालबाट कलाकार बोलाउने, उनीहरूलाई ठेक्कामा युरोपभरि कार्यक्रम गराउने, उठेको पैसालाई पारदर्शितापूर्वक सार्वजनिक नगर्ने काम एनआरएनका माथिल्लो तहबाट नै गरिएको छ ।
कलाकारको आडमा गरिने मानव तस्करीबाट मोटाएका एनआरएन मानव तस्कर आरोपीहरूबारे अहिलेसम्म प्रतिनिधि संस्थाले छानबिन गर्न त के स्पष्टीकरण सोध्न पनि सक्दैन । यी घटना त केवल प्रतिनिधि घटना मात्र हुन् । नेपालबाट एनआरएन बिचौलियाको संलग्नतामा ल्याइएका सयौँ नेपाली माल्टादेखि इटाली, पोर्चुगलसम्म टन्न छन्, मध्यपूर्व र ओसियानामा यिनीहरूको नै बिगबिगी छ । कतिपय दलालहरु त एनसीसी र आईसीसीको नेतृत्वमा समेत छन् । जसबारे कहीँ कतै एनआरएनएले कारबाहिका लागि बहस गर्ने हिम्मत नै गर्दैन किन ? जसको कारण कसैलाई सोधिरहनु आवश्यक छैन सबैलाई ज्ञात छ ।
एनआरएनएमा महसुस गर्ने गरी एक खालको मालिक र दास प्रवृत्ति छ । हिजोका महत्त्वाकाङ्क्षी पेटी बुर्जुवाहरू, आर्थिक महत्त्वाकाङ्क्षी नेपाली धन आर्जन गरेकै भरमा नेतृत्वको लागि होडबाजीमा उत्रन्छन् । नेतृत्वमा रहेका तिनै व्यवसायीहरू नै इमानदार मजदुरहरूलाई प्रवासमा समेत शोषण गर्ने औजारको रूपमा प्रयोग गर्न पछि पर्दैनन् । आफ्नै दाजुभाइ र भान्जाभान्जीबाट श्रमशोषण र लुटको उपायबारे सोचिरहन्छन् । यो सङ्गठन लगभग उनीहरूकै कब्जामा छ भन्दा फरक पर्दैन । पैसा नहुने क्षमतावानहरुको यो सङ्गठन होइन भन्ने हेर्न अन्त जानुपर्दैन । संस्थापक रामप्रताप थापा दाइलगायतका आदरणीय जनहरूलाई हेरे पुग्छ ।
उनीहरुको लुट खेतीबारे त्यस्तै अर्काे एक प्रसङ्गमा कुरा गरौँ । काठमाडौंको बसपार्कमा टावर निर्माण गर्ने भनेर सिङ्गापुरका एनआरएनएहरूबाट करोडौँ कुम्ल्याएको आरोप लाग्ने गरेको ‘आइडिया नेपाल’सँगको सहकार्यबारेमा हामी किन बोल्दैनौँ ? यस्ता केही विवादित संस्थासँग आर्थिक लाभसहित सहकार्य गर्ने गरेको विगतले देखाउँछ । एनआरएनएका नेतृत्वकै अध्यक्षतामा २०१२ मा एनआरएन लगानी कम्पनीले १०० मेगावाटको हाइड्रो प्रोजेक्ट सुरु गर्यो । जसमा सात सय जनाको लगानी रहेको बुझिन्छ ।
त्यो कम्पनीअन्तर्गत लम्जुङको दर्दी खोलाको २७.५ मेगावाटको तीन वर्षे योजना २०१२ बाट सुरु गरियो । तर त्यो अहिलेसम्म सकिएको छैन । त्यसका लागि जम्मा भएको बजेटको अहिलेसम्म सावाँ ब्याज कता गयो ? जानकारी छैन । हेटौँडाको सुरुङमार्ग बनाउने बहानामा एफएनसीसीआईका पूर्वअध्यक्ष कुशकुमार जोशीलगायतले नेपाल पूर्वाधार कम्पनीको नाममा उठाएको करोडौँ रुपैयाँबारे एनआरएनए किन चुप छ ? त्यसमा एनआरएनएको केन्द्रीय तह संलग्न छ भनेर आरोप लागेको छ । त्यो प्रोजेक्टको हविगत कस्तो छ बाहिर आएको छैन । त्यसमा लगानी गरिसकेका आफ्ना सदस्यलाई जानकारी दिनुपर्दैन ? के आफ्ना सदस्यहरू लुटिँदा एनआरएनए जस्तो विशाल सङ्गठनको नेतृत्व चुप लाग्न मिल्छ ? कानुनी उपचारका लागि लगानीकर्तालाई वातावरण बनाइदिन मिल्दैन ?
उसले लगानीकर्ताको व्याजको त के कुरा लगानीको मुख्य रकमसमेत धरापमा पारिदिन्छ । कसैले त्यसो हुनुको कारण सोध्यो भने, ‘मुआब्जाको व्यवधान, मानव दक्षता वा प्राकृतिक प्रकोपजस्ता कारण दिएर जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोज्छ । अहिले एनआरएन अभियन्ताहरू सार्वजनिक लगानीको चोर बाटो प्रयोग गरेर आफ्नो लगानी बिना व्यवसायीमा रूपान्तरण हुँदै गइरहेका छन् । हरेक एनआरएनएका बैठक, फोरम, सभा र सम्मेलनहरूमा विभिन्न रूपका उनीहरुकै व्यावसायिक विज्ञापनहरू देख्न सकिन्छ ।
विज्ञापनदाता अभियन्ता हो वा सुदखोर सामान्य व्यवसायी सर्वसाधारणले छुट्याउन मुस्किल पर्दै गइरहेको अवस्था डायस्पोराको नेपाली समाजमा देखिँदै गइरहेको छ । यसको एउटै कारण हो हामीले एनआरएन होइन केवल आफू मात्र मालिक हुने योजना बोकेर हिँडेका छौँ । नत्र लगानीकर्ता र लगानी उठाउने दुवैको विश्वासनीयताका लागि प्रतिबद्धतापत्रमा दुवै पक्षको हस्ताक्षर खोइ ? कदाचित योजना फेल भयो भने के आधारमा पैसा वापस लिने कानुनी आधार खोइ ? कि त्यो आवश्यक छैन ?
त्यसैले लगानी गर्दा लगानीको ढाँचा, योजनाको प्रारूप, लागत पुँजी, कम्पनीको वैधानिकता, कम्पनी दर्ताको प्रारूप र व्यवस्थापकको विगत तथा आगतको नियत आदि नबुझी लगानीका लागि होमिनु मूर्खता हो । अझ कुनै पनि गैरआर्थिक संस्थाको पदीय जिम्मेवारीमा भएको व्यक्तिले लगानीका लागि नेतृत्वदायी मिसन लिएर हिँडेको छ भने त्यो ज्यादै सोचनीय कुरा हो । अहिले एनआरएनएका मिसनरीहरूमार्फत यो धन्दा फस्टाउँदो रूपमा झाँगिन थालेको छ । ‘एनआरएनको नेतृत्वमा आउनुको मुख्य कारण बृहत् जनसम्पर्कको आधारमा टेकेर आर्थिक लाभ लुट्नु पनि हो’ भन्ने आरोपको खण्डन गर्ने आधार छैन ।
अर्काे कुरा, नेपालमा वैधानिकता गुमिसकेको नेपाली नागरिकतामार्फत गरिएको लगानी तलमाथि भए तपाईंले अदालतमा मुद्दा हाल्न पाउनुहुन्छ ? तपाईंको लगानी यदि सरकारले दिने एनआरएन कार्डमार्फत गर्नुभयो भने त्यो सम्भावना रहन्छ अन्यथा परिस्थिति जटिल हुन सक्छ ख्याल गरौँ । अन्य विषय जस्तै यो पनि लगानीकर्ता एनआरएनहरूले आफ्नो लगानी सुरक्षित गर्दा ख्याल गर्नुपर्ने अर्काे महत्त्वपुर्ण कुरा हो ।
यो संस्थामाथि पारदर्शिताको आरोप लागिरहँदा संस्थागत वा व्याक्तिको निमन्त्रणामा नेपालबाट आउने अतिथिहरूको अभिलेख राख्ने र खर्चलगायतका अभिलेख सार्वजनिक गर्ने परिपाटी लगायत यस सम्मेलनमा पनि देखिएनन् । जसलाई आयोजकहरूको त्रुटि मात्र भन्दा पत्याउने अवस्था रहन्न । सबै एनआरएनहरूले आशा गरेका थिए, यस पटक यस्ता त्रुटिहरू आयोजकले रहन दिने छैनन् । तर आर्थिक अवस्थाबारे कुनै पारदर्शी छलफल नै भएन । ‘अवस्था गुणात्मक रूपमा उस्तै रह्यो । सबैले खाए, पिए, नाचे, ताली बजाए र अब आउने केन्द्रीय चुनावको गणित मिलाएर फर्किए,’ भनेर कहिले आरोप लगाएका छन् ।
सामान्तवादी र निच सोच
अहिले नाम नभनौँ । नेतृत्वमा भएका अधिकांशको वर्गीय, जातीय र सामन्तवादी निच सोच छ । उनीहरु दाताले झैँ बोल्छन, उनीहरुको बोलीबाट नै प्रष्ट रूपमा वर्ग छुट्टिन्छ । नेपाल र नेपालीको लागि केही सहयोग गरेभने उनीहरुले कसैको लागि कसैको लागि गरिदिएझैँ सोच्दछन् । सबै मिलेर सबैका लागि गर्ने सोच उनीहरुमा छँदै छैन ।
‘खराब तत्वले निजी फाइदाका लागि तपाईंको समर्थन गरेको छ भने समर्थन चाहिँदैन भनिदिनुस् । तपाईंका वरिपरिका घेरा फोहोर छन् र तिनीहरूको नियत र निर्देशन गलत लाग्छ भने त्यो त्यागिदिनुहोस् । फोहोर प्रवृत्तिका दलाल, सुदखोर र माफियाहरुको समर्थन र विरोधले हार्ने–जित्ने कुरा तपाईंको भ्रम हो । त्यो जमात त्याग्न सक्नुभयो भने तपाईं डायस्पोराका मजदुर नेपालीहरुको मन जित्न सफल हुनुहुनेछ । हरेक कर्ममा नेपालीहरुको साथ पाउनुहुनेछ । त्यसपछि तपाईंको कीर्तिलाई कसैले रोक्न सक्नेछैन । अब पुरानो पोलिसीको समीक्षा गर्नुपर्ने बेला आएको छ । यसको साथै पुरानो सम्बन्ध, सोच र कार्यशैली चेन्ज गर्नुपर्ने बेला आएको छ । कर्मशील युवा जोस तथा परिवर्तनशील सोच भएको विवेकशील नेतृत्व चाहिएको हो अबको एनआरएनमा ।
सम्झनुस् त, यिनै एनआरएनएका संस्थापकहरू, अभियन्ताहरू र कार्यकर्ता कुनै समय प्रवासीका लागि आस्थाका धरोहरजस्ता थिए । आज प्रवासी नेपाली यिनीहरूसँग वाक्कदिक्क भएको छ । आफ्ना नेताहरूको बाटोमा अनुहार हेर्नसम्म रुचाउँदैन प्रवासी नेपालीले । भिन्नै वर्गको रूपमा, दलाल र माफियाको रूपमा कथित अभियन्ताहरूलाई हेर्न थालिएको छ अहिले । के कारणले यो अवस्था आयो, एनआरएनएमा कहिल्यै बहस भएको छ ? अब पत्रकारहरुले ल्याउँछन यो कुरा बहसमा हिम्मत छ सुन्ने ?
हामीकहाँ अभियन्ताहरूको जीवनस्तरको मोडेल चाहिँ माथिल्लाको अनुकरण नै भइदियो । माथि पुगेपछि शीर्षस्थ पनि बन्नुपर्ने, विधानभन्दा माथि विराजमान पनि बन्नुपर्ने, सम्माननीय बन्नुपर्ने, आफ्नो निश्चित भाग चाहिने, रैतीजस्ता कार्यकर्ता चाहिने, गुट बनाएर विशेष नायकत्वको मजा लिनुपर्ने, आफ्नो गुटको रक्षक, भारदार माफिया, बिचौलिया आदिका साथै परिआउँदा विरोधीमाथि आक्रमण गराउन गुण्डा एवम् डनहरूको एउटा टुकडी पनि आफ्नै हुनुपर्ने, आफूलाई कारबाही गर्न नसक्ने किसिमले डिजाइन गरिनुपर्ने, योजनाबद्ध रूपमा नीतिगत लुट र कालोधनलाई संस्थागत गर्नैपर्ने, सोझा एनआरएनलाई झुक्याउँदै कानुन मिचेर वा छलेर अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्नैपर्ने ।
आफ्नो मान, सम्मान दिगो राख्नका लागि बेलाबेला नेपाल पुगेर पनि महाराजाहरूको दर्शन गर्नैपर्ने, उपहार टक््रयाउनैपर्ने, आशीर्वाद थाप्नैपर्ने, महिमा गान लेखाउनैपर्ने । जसरी पनि नेतृत्वको लगाम समात्न मन लाग्ने र समातेपछि छोड्न मनै नलाग्ने । यो संस्कृति निक्खरा सामन्ती संस्कृति होइन र ? ठ्याक्कै यस्तै छ एनआरएनएका नेतृत्वमा हुनेहरुको संस्कार र संस्कृति ?
सच्चिनु भनेको सुध्रनु हो, परिवर्तन हुनु हो । केन्द्र सच्चियो भने राष्ट्रिय परिषद्हरू स्वतः सच्चिन्छन् । अभियानकर्मीहरू सँच्चिन्छन्, प्रशासनका कारिन्दाहरू सबै सच्चिन्छन् । नेतृत्व रूपान्तरण भए, मुलुकको समेत आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणमा मद्दत पुग्छ । अरब, अफ्रिका जस्ता असुरक्षित देशमा कठिन जीवन गुजारिरहेका नेपालीको सुरक्षा चासोको सम्बोधन हुन्छ । शीर्ष भनिनेहरूबाट सामाजिक सङ्गठनकै आड लिएर आर्थिक लाभ लिने धन्दा अझै फटाउँदै गयोभने तपाईं हामी रोएर एनआरएनए बाँच्दैन, सकिन्छ ।
विलाप गर्दै सदस्यता भर्दै
एनआरएनएमा सदस्यता बनाउन महाभारत छ । सदस्य बन्नेहरूले कारण खोज्छन्, सङ्गठन र सदस्यताको औचित्यबारे प्रश्न उठाइरहेका छन् । सदस्य बन्न क्रमशः हिच्किचाइरहेको अवस्था छ । स्वतस्फूर्त सदस्य बन्ने विकल्प सकिएपछि उम्मेदवारहरूले रुँदै आफै पैसा हालेर सदस्य बनाउँछन्, टिकट काटेर नेपाल लैजान्छन्, खान्की, रुई फुईको व्यवस्था गर्छन् र पकेट खर्चसमेत दिन्छन् । त्यतिले चुनाव जित्न कहाँ पुग्छ र ? अर्काेतिर नेपालका बडे नेताहरूलाई खर्चको जोहो गरिदिन्छन् र मुख्य नेताको जी–हजुरी, नेताजीहरूको आर्थिक माग पूरा गर्ने बचन दिन्छन् । चुनाव जित्नु भनेको त्यसपछि नेताबाट पाउने समर्थनले हो भन्ने नेतृत्वको बुझाइ छ । एनआरएनका अघिल्ला नेतृत्वले नेपालका नेताहरूको बानी बिगारे । कार्यकर्तालाई खरिदको साधन बनाए । त्यसपछि जितेर पाएको पदका लागि उत्सव गर्छन्, रमाउँछन् र गर्व गर्छन् हाम्रा एनआरएनएका छोटे नेताहरू । अब राजनीतिक तथा दलालहरुको सेन्डिकेट तोड्ने हिम्मत भएको एनआरएनए नेता चाहिएको छ ।
नेतृत्वमा पुग्न किन लुछाचुँडी हुन्छ ?
अधिकांशले खादा, सम्मान र समाजसेवाको भावनाले भन्दा पनि एनआरएनएको नेतृत्वमा जान मरिहत्ते गर्ने कारण राज्यको सहुलियत नीतिमा टेकेर विभिन्न बहानामा लिने आर्थिक लाभ नै हो । विगत नेतृत्वहरूका अधिकांश गतिविधिले देखाउँदै आएका तथ्यहरू हेर्दा सोझा प्रवासी नेपालीहरूबाट कम्पनीको साझेदार बनाउने नाममा अथाह पैसा उठाउने, उठाएको पैसा बैङ्कमा ब्याज लगाउने र ब्याज उठाएर आफै खाने, वर्षाैंसम्म विभिन्न बहानामा काम सम्पन्न नगर्ने, अन्त्यमा बिनालगानी आफै कम्पनीको मालिक बन्ने प्रथा यो संस्थाभित्र मौलाउँदो छ । त्यस्तै नेपालमा लगानी गर्ने बिजनेस पाट्नर खोज्ने, त्यो पैसा युरोपमा समेत व्यवसायामा लगानी गर्ने उनीहरुको दाउ हुन्छ ।
नेपालमा भवितव्य भयोभने उनीहरु मुस्कुराउँछन् । अथाह पैसाको खेलो सुरु हुन थाल्छ । भ्रष्ट नेताको कालो धन यस्तै मार्फत विदेशमा लगानी गरिएको छ भनिन्छ । भ्रष्टाचारीहरुसँगको कनेक्सन र कालो धनको विदेशमा लगानीको स्रोतबारे अनुसन्धान भइरहेको सुनिएको छ । एनआरएनएका संस्थापकको नाम यसरी नै मुछिएको तथ्यले एनआरएनएको नियतलाई प्रष्ट पार्छ ।
त्यसको विरुद्ध पनि सबै एनआरएन सचेत हुन जरुरी छ । नेपालका नेताहरूको चाकडी गर्नुको मूल अभिप्राय सङ्गठनको सहुलियतमा लिने व्यक्तिगत लाभ र भ्रष्टचारीहरुसँगको कनेक्सन बलियो बनाउनु हो । लगानीबारे प्रवासी नेपालीलाई अनेक तरिकाले झुक्याइन्छ । मालिक अभियन्ताहरुले सेयर बापत उठेको पैसाबाट गज्जबले शोषण गर्छन् । उनीहरुले आफ्नै सन्तान वा आफन्तको रोजगारी त्यही कम्पनीमा ग्यारेन्टी गरिदिन्छन् र काम सम्पन्न नहुँदैबाट अधिकतम तलबको व्यवस्थापन गरिदिन्छन् । त्यसका लागि लगानीकर्ताहरूले सूक्ष्म अनुगमन गर्नु आवश्यक मात्र नभएर अनिवार्य हुन्छ । एनआरएनएको नेतृत्वमा जान मरिहत्ते गर्नुको मूल अभिप्रायमध्ये यो पनि एक हो । त्यसमा केही अभियन्ताहरू अपवाद पनि हुन सक्लान् तर यथार्थ नियति यही हो ।
अन्त्यमा, अब प्रवासी मजदुरहरूले तिनीहरूको मालिक–प्रवृत्तिको विरुद्ध आवाज बुलन्द पार्नैपर्छ । प्रवासीहरूलाई अनावश्यक प्रयोग गर्ने र सामाजिक संस्थालाई प्रयोग गरेर व्यक्तिगत फाइदा उठाउने तप्का चिन्न ढिलाइ गर्दा वा त्यो प्रवृत्तिलाई बेलैमा खबरदारी नगर्दा हामीलाई पछिसम्म उनीहरूको संस्थागत दास बन्ने अवस्था रहिरहन्छ । त्यसैले चुनावमा समेत मजदुर वा मजदुरको हितलाई स्थान दिने तहबाटै नेतृत्व हुनेगरी आफ्नो प्रतिनिधि चुन्ने प्रयास गरौँ । नाफाखोरहरूको व्यक्तिगत हित, सानसौकतमा सीधा साधा मजदुरलाई प्रयोग गर्न खोज्ने दलाल पेटी–बुर्जुवाहरूसँगबाट सधैँ चनाखो रहने गरौँ । यो कहिल्यै नभुलौँ, एनआरएनएका तीन तहहरू क्रियाशील छन् । एकातर्फ नेतृत्वमा राज्य र प्रवासी नेपाली ठग्ने केही सुदखोरहरूको एउटा तह छ । त्यो तह तस्कर, दलाल, माफिया र सैतान कार्यकर्ताको बाक्लो तहले घेरिएको छ ।
त्यस्तै अर्काेतर्फ करिब ८८ प्रतिशतभन्दा बढी प्रवासका इमानदार नेपाली मजदुर छन् । त्यसैले असल व्यवसायी र कामदार वर्ग अत्यधिक बहुमतमा छौँ । हामीले आफ्ना लागि निर्णय गर्न सक्छौँ भने आफ्नो समूहका लागि किन सक्दैनौँ ? साहस गरौँ, हामी कसैको भोटबैङ्क नबनौँ, किनबेचको साधन पनि नबनौँ । त्यसैले अहिलेको सन्दर्भमा सुदखोरहरूद्वारा स्वार्थवश ल्याइएका राजनीतिक र आर्थिक मिसनहरू भङ्ग गरिदिने, राजनीतिक सेन्डिकेट तोडिदिने र प्रवासी कामदारको पक्षमा आफूलाई उभ्याउने नीति नै सही हुन सक्छ ।
प्रवासमा समेत दास–मालिक प्रथालाई चुनौती दिने हैसियत नबनाएसम्म कामदार वर्ग एनआरएनएमा लाग्नुको कुनै अर्थ रहन्न । यस्तो फोहोर र बदनियत एनआरएनए हामीलाई चाहिएको पनि छैन । सरल र समभाव भएको प्रगतिशील उमेदवार अबको रोजाइ हुनु पर्छ । एनआरएनएको दोस्रो सेसनमा रहेका युबा उम्मेदवारहरूले संस्थाभित्रको यो फोहोर बढार्ने आँट गर्लान् नगर्लान् ? यो सब भविष्यको पर्खाइमा छ । यो लेख तिनै कर्मशील, असहाय र दुःखी मजदुर, इमानदार देशभक्त प्रवासी नेपाली र यस सङ्गठनमा इमानदारीपूर्वक समर्पित आस्थावानहरूका लागि हो । एनआरएनएभित्र भइरहेको बेथितिप्रतिको यो रामधुलाई केवल संस्थागत सुधार र रूपान्तरणको आशयले गरिएको हो । यो अप्रेसनलाई पूर्वाग्रहको रूपमा कसैले बुझ्नुहुने छैन भन्ने पङ्क्तिकारको आशा छ ।